Boky faharoan'i Henoka - Wikipedia
Boky faharoan'i Henoka
Ny Boky faharoan'i Henoka izay atao hoe koa Henoka slava na Bokin'ny Tsiambaratelon'i Henoka dia boky apokrifan'ny Testamenta Taloha. Ny anaran'io boky io amin'ny fiteny slava dia Книги ст̄и таинь Енохо / Knigi stî taih Enokho. Tantaraina ao ny fitetezan'i Henoka ny "Lanitra fito" sy ny fanehoana sy ny fanambaràna aminy atsiambaratelo misesisesy. Nosoritsoritina taminy ny famoronana an'izao tontolo izao ary naseho taminy koa ny tsiambaratelon’ny hoavy.
1 Fizaràn'ny boky
1.1 Ny nanehoan'ny anjely an'i Henoka ireo lanitra fito
1.2 Ny nanehoan'Andriamanitra tsiambaratelo tamin'i Henoka
1.3 Ny nitantaran'i Henoka ny zavatra naseho azy
1.4 Ireo mifandimby taorian'i Henoka sy ny amin'i Melkisedeka
Fizaràn'ny boky[hanova | hanova ny fango]
Azo zaraina efatra ny Boky faharoan'i Henoka:
Ny nanehoan'ny anjely an'i Henoka ireo lanitra fito (1 -- 21)
Ny nanehoan'Andriamanitra tsiambaratelo tamin'i Henoka (22 -- 37)
Ny nitantaran'i Henoka ny zavatra naseho azy (38 -- 68)
Ny fifandimbiasan'ireo mpisorona mpandimby an'i Henoka (69-73).
Ny nanehoan'ny anjely an'i Henoka ireo lanitra fito[hanova | hanova ny fango]
Nisy anjely roa nitondra an'i Henoka izay efa 365 taona ka kampiseho azy ireo Lanitra fito:
Tao amin'ny Lanitra voalohany, naseho azy ny toerana fanaraha-mason'ny anjely ny zavatra eny amin'ny lanitra (ny kintana sy ny rahona ary ny tahirin'orampanala sy fanala). Tao amin'ny Lanitra faharoa, nifanena tamin'ireo anjely potraka i Henoka, izay voahazona ao amin'ny toeram-pifonjany eo am-piandrasana ny hitsarana azy.
Tao amin'ny Lanitra fahatelo, hitan'i Henoka ny Paradisa, izay hitondrana ny ny olo-marina; eo avaratry ny Paradisa no misy ny Afobe izay hampijaliana ny olon-dratsy. Tao amin'ny Lanitra fahefatra no misy ny volana sy ny masoandro, ka ao no misy ny fanoritsoritana antsipiriany ny momba ny fihetsik'izy ireo.
Tao amin'ny Lanitra fahadimy, nahita ny rahalahin'ireo anjely potraka, dia ireo Gregory, i Henoka; anjely miaramila izay mitarehin'olombelona sady goavam-be izy ireo. Tao amin'ny Lanitra fahenina, nahita ny anjely fito izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny filaminan'izao tontolo izao i Henoka.
Tao amin'ny Lanitra fahafito i Henoka nahita ireo Arikanjely (indrindra fa i Gabriela, i Mikaela ary i Pravoily na Vretily mpitan-tsoratr'Andriamanitra) sy ireo Ofanima sy ireo Serafima sy ireo Kerobima ary Andriamanitra izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany.
Ny nanehoan'Andriamanitra tsiambaratelo tamin'i Henoka[hanova | hanova ny fango]
Nahazo alalana ka nentin'ny anjely Gabriela i Henoka hiditra ao amin'ny Lanitra fahafito. Ao izy no nahita an'Andriamanitra tenany. Rehefa avy nohosoran'i Mikaela izy dia nanjary nitovy endrika amin'ny anjely, ka dia nitsapa fanahy ireo anjeliny Andriamanitra tamin'ny fanasany azy ireo hiankohoka amin'i Henoka hahitany ny fanajan'ireo azy. Avy eo, niantso ny Arikanjely Vretily sady nampaka penina bararata sy boky ho an'i Henoka ary nampanonona azy izay zavatra rehetra tokony ho fantatra momba izao rehetra izao. Rehefa afaka telopolo andro sy telopolo alina dia nahavita soratra boky miisa 360 i Henoka. Taty aoriana dia nambara sy nampianarina an'i Henoka manokana koa ny tsiambaratelon'ny famoronana an'izao tontolo izao, izay tsy fantatry ny anjely. Voaresaka koa ny amin'ny safodrano izay ho avy. Taorian'izany, nalefan'Andriamanitra tety an-tany i Henoka tanatin'ny telopolo andro mba hilaza izany zavatra rehetra izany tamin'ireo zanany sy hanolotra azy ireo ny boky rehetra.
Ny nitantaran'i Henoka ny zavatra naseho azy[hanova | hanova ny fango]
Rehefa tafaverina tety an-tany i Henoka dia niteny tamin'ireo zanany: nilaza tamin'izy ireo ny zavatra rehetra nampahalalaina azy izy, nampitandrina azy ireo ny amin'ny fahotana (ny fijangajangana sy ny hafa koa) ary nanafatra azy ireo imbetsaka sy amin'ny fomba samihafa mba hiaina amin'ny fomba mendrika sy araka ny hitsiny, araka an'Andriamanitra ary haneho fitiavana amin'ny zavatra manana aina rehetra. Naverin'i Henoka notenenina tamin'ireo mpitarika ny Olombelona rehetra izany teny rehetra izany sady niteny tamin'izy ireo izy ny amin'ny fihobiana sy ny valisoan'ny fiainana nahafa-po sy nahavitana adidy tsara. Rehefa tapitra ny telopolo andro, dia nentina tany an-danitra indray i Henoka ka tsy niverina tety an-tany intsony.
Ireo mifandimby taorian'i Henoka sy ny amin'i Melkisedeka[hanova | hanova ny fango]
Tantarain'ny boky ny fifandimbiasan'ireo mpisorona taorian'i Henoka. Ny zanakalahin'i Henoka atao hoe Matosalema (na Metosela) dia nangatahin'ny vahoaka hatao mpisorona vonjimaika. Ny asa fisoronana manaraka dia nosahanin'i Niry (na Nira), zafin'i Matosalema, izay tsy naharitra koa. Izay vao tantaraina ny fahaterahana mahagagan'i Melkisedeka, zanak'i Niry tamin'i Sofonima vadiny, ary koa ny nitodran'ny arikanjely Mikaela azy tany an-danitra mba hanomana ny asa fisoronany aorian'ny safodrano. Ao aminin'ny soratanana firaketana sasany, ity fizaràna farany ity dia miafara amin'io nefa amin'ny soratanana hafa dia mitohy resaka fanoritsoritana fohy ny amin'ny safodrano.
Boky voalohan'i Henoka
Boky fahatelon'i Henoka
Boky amin'ny anaran'i Henoka
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Boky_faharoan%27i_Henoka&oldid=815355"
Voaova farany tamin'ny 24 Aprily 2018 amin'ny 18:49 ity pejy ity.